Trick: afovoaho ny toerana tanteraka div | Famoronana an-tserasera
Amin'ny CSS indraindray isika dia manasarotra ny fiainantsika amin'ny zavatra tsotra izay tsy dia sarotra noho ny eritreritsika, ary rehefa mahita ny vahaolana isika dia saika mihomehy amin'ny fandinihana anecdotes toy izany.
Olona mihoatra ny iray no nanontany ahy ny fomba hananganana ivon-toerana tena misy toerana, ary tena tsotra ny valiny:
Omenay sakany voafetra ny div. Ohatra: 500px
Tena mametraka ny div izahay 50% sisa. Ohatra: toerana: tanteraka; havia: 50%;
Esorinay ny antsasaky ny refesiny amin'ny sisiny. Ohatra: sisiny havia: -250px;
Ny valiny dia div mifantoka tanteraka, miorina tanteraka.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » teknolojia » CSS » Trick: afovoaho toerana iray tanteraka div
Ivan Lira dia hoy izy:
Misaotra betsaka .. rehefa miteny zavatra tsotra ianao ary na eo aza ny fandehan'ny fotoana dia mbola mpanoratra ny aretin'andoha maro.
Tena nilaina ho ahy ny hafatrao, misaotra betsaka.
Valiny tamin'i Iván Lira
pod dia hoy izy:
Misaotra indrindra anao !!!
Mamaly an'i cob
Glbroman dia hoy izy:
Fandraisana anjara tsara no nanompoako betsaka, misaotra
Mamaly an'i Glbroman
LUCASG dia hoy izy:
Adala izaitsizy no nanompoany ahy: D
Valiny amin'i LUCASG
Carlos tena tsara.
Mario Lozano placeholder image dia hoy izy:
Valiny tamin'i Mario Lozano
Frank Koq dia hoy izy:
Misaotra anao, nanompo ahy izy io
Valiny tamin'i Frank Koq
Namonjy ahy ianao !!! Misaotra anao :)
Mamaly an'i marc
Danielfloyd dia hoy izy:
Misaotra dadatoa, nanampy be ahy ianao !!, izany tsy fahaizako sary an-tsaina izany.
Valiny tamin'i DanielFloyd
Misaotra indrindra anao !!!!! manampy ahy foana io fika io haha
Mamaly an'i damian
o dia hoy izy:
misaotra betsaka namana tsara
Chrismart Anji dia hoy izy:
Tsy afovoany izany, miankina amin'ny habeany tamin'ny singa divay fototra anaovantsika azy io miankina amin'ny zavatra apetraka ao anatiny, ho ahy dia tena ilaina kokoa ny mampiasa an'io noho ny fahitana raha toa ka hitako fa mifantoka kokoa sy reponsive:
sisiny havia: -100px;
ho antsasaky izany.
Valiny tamin'i Chrismart Anji
Edgar cjuno dia hoy izy:
Ankasitrahana ny fandraisana anjara, tena nanampy ahy izy, arahaba!
Valiny tamin'i Edgar Cjuno
Miriam Jess dia hoy izy:
Ny fandraisana anjara tena tsara dia nanampy betsaka ahy, fahasoavana arivo!
Valiny tamin'i Miriam Jess